Songadina ao Goatemalà – sept 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2019 9:05 GMT
Satria miomana amin'ny lalao androany alina ao Guatemala City ny ekipa mpilalao baolina kitra Amerikana sy Goatemalteka, dia toa manomboka mipaka bebe kokoa any amin'ireo mpamaky miteny Anglisy ny vondrona bilaogy Goatemalteka. Ao amin'ny lahatsoratra momba ny fampiroboroboana ny toerana vakoka manerantany ao Goatemala, Guate360 manoratra fa, “tsy vahiny aminay ato amin'ny Guate360 ny mandefa hafatra amin'ny fiteny roa.” Rehefa manao izany izahay, dia atao miaraka amin'ny fahatsapana fa manana mpihaino manerantany izahay. ” Bilaogy Goatemalteka hafa ahitana lahatsoratra amin'ny teny anglisy sy espaniola koa ny Chapinadas. Ny lahatsoratra androany kosa dia mitantara ny tsara sy ratsy amin'ny andian-tantara fahavaratra ho avy Survivor: The Maya Empire, izay manomboka ny 15 septambra ary miandrandra mpijery 20 tapitrisa any Etazonia:
Ny tranonkala Survivor.com, na izany aza, dia toa tsy dia liana loatra amin'ny fiantraikan'ny fampisehoana eo amin'ireo Goatemalteka raha ampitahaina amin'ny fanasongadinana ny “hafanana tafahoatra … oram-batravatra sy … karazana zavaboahary manaikitra sy manindrona.”
Oscar avy ao amin'ny DesdeGuate.com indray nilaza fa 15 andro monja taorian'ny nanambaran'ny Comcel, mpamatsy onjam-pifandraisana antserasera (Wireless) mifototra amin'ny EDGE any Goatemala, dia nampahafantatra ny tolotrany vaovao 1x-EVDO koa ny mpifaninana aminy, Telefonica, izay ahafahana miditra aterineto any amin'ny faritra lehibe rehetra ao Guatemala City amin'ny vidiny 50 dolara isam-bolana miampy hetra.
Christian Van Der Henst nanamarika fa ho avy ao Quetzaltenango amin'ity herinandro ity ary avy eo ao Antigua ny Alatsinainy manaraka ny tetikasa EnRed, izay mandrisika ireo mpianatra manerana an'i Goatemala mba hanomboka bilaogy sy hampiasa ny aterineto. Nasain’ny elsalvador.com ihany koa i Christian mba hiresaka paikady amin'ny fandaharan'izy ireo vaovao, Operación Red, izay mandrisika ny fandraisana anjara nomerika maromaro kokoa ao El Salvador.
Raha toa ka tsy afa-po amin'ny fitadiavanao vaovao momba an'i Goatemala ianao, dia manana angona lahatsoratra tamin'ny herinandro lasa avy amin'ny fiarahamonina famahanam-bilaogy ny Guate360.